भोटर लिस्टमा नाम नदेखेपछि चकित भए डा.बराल - Health Today Nepal
भोटर लिस्टमा नाम नदेखेपछि चकित भए डा.बराल
May 12th, 2017 समाचार0comments
भोटर लिस्टबाट एकाएक नाम हराएपछि यति बेला वरिष्ठ क्यान्सर रोग विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद बराल र श्रीमति सन्ध्या बराल तनावमा छन् । बराल दम्पती मत खसाल्नकै लागि आफ्नो युरोप भ्रमण छोट्याएर हालै राजधानी फर्केका हुन ।
सधै मत खसाल्ने क्षेत्र नक्साल क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा आफ्नो र पत्नी दुबैको नाम फेला नपरेपछि डा. बरालले त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग वा स्थानिय प्रशासन कस्ले लिने हो ? प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । डा. बरालले भने, ‘ हामी बिगत २५ बर्षदेखि नक्साल क्षेत्रबाटै मतदान गर्ने गरेका थियौ । संविधान सभा २०७० को निर्वाचनमा नक्सालबाटै मत दिएका थियौ । मतदाता परिचय पत्रका लागि सबै प्रकृया पुरा गरेका थियौ । तर अहिले एकाएक भोटर लिस्टबाट हाम्रो नाम हरायो । किन ? ’
मतदान गर्ने बेला भोटर लिस्टमा नाम हटाइदिए पछि आफुहरु मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएकोमा निकै चित्त दुखेको डा. बरालले बताए । २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानिय निर्वाचनमा प्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट कुनै पनि नागरिकलाई बञ्चित गर्नु कानूनी राज्यको उपहास भएकाले तत्काल आफ्नो परिवारको नाम संलग्न गरि मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध गराएर गल्ती सच्याउन निर्वाचन आयोगसंग माग गरेका छन् ।
Previous article गगनको विरोधमा औषधि आयात ठप्प हुने
Next article औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना